इस्लाममा ब्रतको अर्थ- अल्लाहको उपासनाको लागि प्रात: काल (फज्रको अजान) देखि सूर्यास्त (मग्रिबको अजान) सम्म खानपिन, सम्भोग तथा ब्रतलाई भङ्ग गर्ने समस्त क्रियाकलापहरुबाट टाढा बस्नुलाई ब्रत (रोजा) भनिन्छ।
Read more: चौथो अध्याय- तपाईको ब्रत
Read more: ईदुल्-फित्र
अल्लाहले आफ्नो कृपा र करुणाले अशक्त व्यक्तिहरुका लागि ब्रत बस्न छुट गर्नु भएको छ। उनीहरु यस प्रकार छन्…
१) बिरामी- ब्रतले गर्दा रोग झन बढ्ने वा निको ढिलो हुने सम्भावना छ भने यस्तो बिरामीले ब्रत बस्नु पर्दैन तर निको भैसकेपछि बस्न नपाएको ब्रतलाई कजा (पूरा) गर्नु पर्छ।
Read more: अल्लाहले कसको लागि ब्रत छुट गर्नु भएको छ?
१) पारदर्शी पोशाक- मुस्लिमले आफ्ना अङ्गहरुलाई लुगाले छोप्नु अनिवार्य छ। अल्लाहले भन्नु भएको छ… “हे आदमका सन्तान हो ! हामीले तिमीहरुका लागि पोशाक अवतरण गरेका छौं। जसले तिमीहरु आफ्ना अङ्गहरुलाई छोप्दछौ।” (श्रोत- सूरह अल्-आ’राफ : ७/२६) पर्दाको सिमा- पुरुष र महिलाले आ-आफ्ना अङ्गहरुलाई कति सम्म छोप्नु पर्दछ भन्ने कुरालाई इस्लामले निर्धारित गरेको छ। पुरुषले नाँइटोदेखि घुँडा सम्म र महिलाले महरम बाहेकका पुरुषहरुको अगाडि अनुहार र हात बाहेक सम्पूर्ण शरीरलाई छोप्नु पर्छ। त्यसैले छोटो, कसिलो, निकै पातलो तथा अङ्गहरु देखिने पारदर्शी लुगाफाटा र पोशाकहरु कदापि लगाउनु हुँदैन। रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ले अङ्ग देखिने पारदर्शी कपडा लगाउनेहरुलाई नरकको धम्की दिनु भएको छ… “दुई प्रकारका मानिसहरु नरकमा जान्छन्; त्यसमध्ये एउटा, कपडा लगाए पनि नाङ्गै देखिने महिलाहरु हुन्।” (श्रोत- मुस्लिम : २१२८)
Read more: अवैध पोशाकहरु
यस्तो अवस्थामा श्रीमतीको धर्ममाथि ध्यान दिनु पर्छ… श्रीमती अहले-किताब (यहूदी वा क्रिस्चियन) हुन् वा अहले-किताब बाहेक जस्तै हिन्दू, बौद्ध वा धर्म नमान्ने नास्तिक हुन्…
Read more: श्रीमानले इस्लाम ग्रहण गर्यो तर श्रीमतीले गरिनन् भने के गर्नु पर्छ?
यदि काफिर दम्पती एकै साथ इस्लाम स्वीकार गर्छन् भने नयाँ विवाह (निकाह) गर्नु पर्दैन, बरु पुरानो सम्बन्धलाई सुमधुर पार्नु पर्छ। तर कसैले महरम जस्तै… आफ्नै आमा वा दिदीबहिनी वा फुपू वा सानीमासँग विवाह गरेको छ भने अनिवार्य रुपमा सम्बन्ध विच्छेद गर्नु पर्छ। (यस ’bout अधिक जानकारीको लागि पृष्ठ न० १९० हेर्नुहोस्)
Read more: श्रीमतीले इस्लाम ग्रहण गरिन् तर श्रीमानले गरेनन् भने के गर्नु पर्छ?
Read more: बाल-बालिकाहरुको इस्लाम
प्राकृतिक तरिकाहरु के के हुन्?
इस्लामले मुस्लिमलाई सुन्दर र चिटिक्क हुने प्रेरणा दिन्छ। .
प्राकृतिक तरिकाहरु (सुननुल-फित्रह) ती स्वभावहरू हुन्, जसमाथि अल्लाहले मानिसहरुलाई सृष्टि गर्नु भएको छ। यसले मुस्लिमहरुलाई राम्रो रुप, आकार, सौन्दर्य र पूर्णता प्रदान गर्दछ, किनकि इस्लामले सुन्दरता र रुपको रेखदेख पनि गर्छ । ताकि उसको बाहिर र भित्र दुवै पूर्ण होस्।
Read more: प्राकृतिक तरिकाहरु
Read more: इस्लाममा पोशाक